मनाङेले लिए सपथ
पोखरा । हिमाली जिल्ला मनाङ ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) ले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन् । उनलाई सोमबार गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सांसदको सपथ ग्रहण गराएका हुन्। प्रदेशसभामा निर्वाचित भएको करीब १ वर्षपछि उनले सपथ लिएका हुन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा
शहीद धर्मभक्तको सम्झना
काठमाडौं । आइतबार शहीद धर्मभक्त माथेमालाई मृत्युदण्ड दिइएको स्थान काठमाडौंका सिफलमा उनको सालिकमा पुष्पगुच्छा अर्पण गरी सम्झना गरिएको छ । शहीद सप्ताह कार्यक्रमको अवसर पारेर माथेमाको सम्झना गरिएको हो । त्यस अवसरमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले विधिको शासनले शहीदको सपना पूरा
संसदमा मुठभेड पनि हुनसक्छ: गगन थापा
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवम् पूर्वमन्त्री गगन थापाले सभामुखको भूमिका तटस्थ र सरकार जिम्मेवार नभए शुक्रबार बस्ने संसद बैठकमा मुठभेड पनि हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको लागि
कांग्रेस अझै कडा बन्ने
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदमा अझै कडा रुपमा प्रस्तुत हुने र संसद अवरुद्ध गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने बताएको छ । कांग्रेसको बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सरकार लचिलो नभए निरन्तर संसद अवरुद्ध पार्ने रणनीति पार्टीले लिएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले
सरकारको समृद्धिको नाराले आफैंलाई गिँज्याइ रहेछःरिजाल
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्व मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले आर्थिक समृद्धिको नारा लिएको सरकारले विलासिताको सुविधा उपयोग गर्ने गरी करोडौँ मूल्यमा सवारीसाधन खरिद गर्ने, महङ्गा भवन बनाउनेजस्ता निर्णयले सरकारलाई नै गिँज्याइरहको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा वैठकलाई सम्बोधन गर्दै
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिंहदरबार पश्चिम मूलद्वारमा रहेको राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह मूर्तिमा पुष्प गुच्छा अर्पण गर्दै स्मरण गर्नु भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले २९७औं पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले शुक्रबार आयोजना गरेको समारोहमा सरिक भई पृथ्वी
कांग्रेस सांसदद्वारा संसद घेराउ,वैठक अवरुद्ध
काठमाडौं । संघीय संसदमा प्रधामन्त्री केपी शर्मा आलीको सम्बोधन सकिए लगत्तै प्रश्न गर्न नदिएको भन्दै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले विरोध गरेका छन् । उनीहरूले सभामुख कृष्ण महराले प्रश्न गर्ने समय उपलब्ध नगराएको भन्दै संसद घेराउ गरेपछि १५ मिनेटका लागि वैठक स्थगन गरिएको छ । आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्व मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले सरकार संसदीय समितिका खिलाप काम गरिरहेको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा सार्वाजनिक लेखा समितिको वैठकमा वाइडबडी छानबिनमा संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन संसदीय अभ्यास अनुसार नै आएको भन्दै अनावश्यक प्रश्न नउठाउन आग्रह गरे ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा कैलाली निर्वाचन १ बाट विजयी भएका राजपाका नेता रेशम चौधरीलाई सपथ खुवाइएको छ । उनले विजयी भएको १३ महिनापछि पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका हुन् । उनलाई सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफ्नो सचिवालय सिंहदरबारमा बिहीबार सपथ ग्रहण गराए । टिकापुर घटनाको योजनाकारका
पशुपति शमशेरले भने, ‘राष्ट्रपति किन महँगी बन्दै हुनुहुन्छ ?’
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विलासीपनले मुलुकमा नयाँ प्रश्न जन्माएको टिप्पणी गरेका छन् । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘गणतन्त्रकी राष्ट्रपति किन महँगी बन्दै
काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा सुरेन्द्र केसीले पृथ्वीनारायण शाहलाई सराप्नेहरूले गम्भीर भुल गरिरहेको बताएका छन् । आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा स्वतन्त्र नागरिक समाजले पृथ्वीनारायण शाहको २९७ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै डा. केसीले भने,‘ पृथ्वीनारायण शाहको
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सांस्कृतिक विविधता नै नेपालको मौलिकता रहेको बताउनुभएको छ । गुरुङ समुदायले मनाउने तमु ल्होसारको उपलक्ष्यमा अध्यक्ष दाहालले आज एक शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै सांस्कृतिक पर्वले सम्पूर्ण नेपालीमा सहिष्णुता, भातृत्व, आपसी
काठमाडौं । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले सरकारको उपलब्धि भनेकै निरन्तर सरकार चलिरहनु भएको बताएका छन् । संसदमा प्रतिपक्षीको भूमिकालाई कटाक्ष गर्दै उनले भने,‘सरकार स्थिर छ । कसैले हल्लाएर हल्लिँदैन् । संसदमा विपक्षी छैन । सत्तापक्षका नेताले नै प्रतिपक्षीको
प्रचण्डलाई गणतन्त्रकै चिन्ता
काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानका आधारभूत पक्षमा अझै आशंका पैदा भएको आफूले पाएको टिप्पणी गरेको छन् । कांग्रेस महासमितिको बैठकमा हिन्दु राज्यको विषयलाई लिएर उठेको विवादप्रति लक्षित गर्दै उनले भने,‘लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिप्रति सहकर्मी दलमै आशंका देखिएको छ
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन भोलिबाट, यस्तो छ प्राथमिकता र कार्यसूची
काठमाडौं – सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को तेस्रो अधिवेशन भोलि बुधबारदेखि शुरू हुँदैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बुधबार अपराह्न ४ बजे प्रारम्भ हुने गरी सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानले सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिलाई
भट्टराईको जति चर्चा गरेपनि अपूरै हुन्छःदेउवा
अभिषेक सापकोटा/काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वीपी संग्राहलय प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको ऐतिहासिक स्थान भएकाले यसलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका छन् । कृष्णप्रसाद भट्टराईको ९५ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा पूर्णकदकको शालिक अनावरण कार्यक्रममा बोल्दै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा लामो रस्साकसीपछि पदाधिकारी चयनको विवाद सल्टिएको छ । अब १३ जना पदाधिकारी राख्ने सहमति भएको छ । शीर्ष नेताहरूबीच सह–महामन्त्री ७ जना, उपसभापति र महामन्त्री २/२ जना हुने नयाँ सहमति भएको छ । सभापति र कोषाध्यक्ष गरी पदाधिकारी १३ सदस्यीय बनाउने सहमति भएको
‘चुतुर’राजनीतिज्ञको सुनसान अन्त्यष्टि
अभिषेक सापकोटा/काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरीको बुधबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्यष्टि गरिएको छ । मंगलबार बिहान ९३ वर्षको उमेरमा निधन भएका गिरीको विद्युतीय शव गृहमा अन्त्यष्टि गरिएको हो । गिरी क्यान्सरबाट पीडित थिए । बिहीबार दिउँसो ३ बजे एउटा सेनाको गाडी फुलमालाले सजिएको थियो । गाडी सरारस
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका महासमितिको बैठकमा पार्टीलाई कुन दिशामा लैजाने बहस चलिरहेको छ । आइतबारदेखि जारी महासमिति बैठकमा सदस्यहरूले आ–आफ्ना भनाइ राखिरहेका छन् । उनीहरूले नेतृत्वको विवाद सल्टाएर पार्टी एक ढिक्का हुनुपर्ने भन्दै नेतृत्वलाई दबाव दिइरहेका छन् । पेचिला मुद्धाहरू
पञ्चायतकालका हस्ती पूर्व प्रधानमन्त्री डा.तुलसी गिरीको निधन
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरीको मंगलबार बिहान निधन भएको छ । क्यान्सरबाट पीडित गिरीको आफ्नै निवास बुढानिलकण्ठमा निधन भएको हो । उनको ९३ वर्षको उमेर निधन भएको हो । नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेका गिरी पञ्चायतका हस्तीका रुपमा चिनिन्छन् । उनलाई कलेजोको क्यान्सर लगाएतका अरु रोगहरुले
नेकपा बैठकमा गौतमको प्रस्तावले तरङ्ग
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा शुरु भएको छ । बैठकमा स्थायी कमिटीका सदस्यले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेस गरेको राजनीति प्रतिवेदन र वामदेव गौतलमे पेस गरेको फरक मतमा आफ्नो धारणा राख्ने कार्यसूची छ । बामदेव
काठमाडौँ, १ पुस । नेपाली काङ्ग्रेस महासमिति बैठकको बन्द सत्र बिहानदेखि शुरु भएको छ । बन्द सत्रमा महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले ‘साङ्गठनिक प्रतिवेदन’, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले पार्टीको ‘लेखा प्रतिवेदन’ र सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पार्टीको ‘आर्थिक प्रस्ताव’ पेश गर्नुभएको छ । तीन
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको महासमितिको बैठक आज (शनिबार) ११ः३० बजेबाट सुरु हुँदैछ । सिंहदरबारको पश्चिम प्रवेश द्वारअगाडि रहेको यगम्बर पार्टी प्यालेसमा हुने महासमितिको उद्घाटन सत्र सकिएपछि बन्द सत्र सुरु हुनेछ । पुस ३ सम्म चल्ने बैठकमा पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक, महामन्त्री डा. शशाङ्क
काठमाडौं । २८ मंसीरदेखि काठमाडौंमा शुरु भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा ५ वटा दस्तावेजमाथि छलफल हुने तय भएको छ । उपसभापति विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक, महामन्त्री डा शशांक कोइरालाले सांगठिनक, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले विधान संशोधन, सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले समग्र
कांग्रेस महासमिति बैठकको तयारी पुरा
काठमाडौं । शनिबारबाट हुने नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकको तयारी पूरा भएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बैठकको तयारी पूरा भएको जानकारी दिएका हुन् । पुस ३ गतेसम्म चल्ने बैठकमा करिब १६ सय महासमिति प्रतिनिधि सहभागी हुने छन् । बैठकमा संघीयता
अभिषेक सापकोटा/काठमाडौं कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले प्रभावकारी कांग्रेस पार्टी निर्माणका लागि आफ्नो अवधारणा सार्वजनिक गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी पार्टीको महासमिति बैठकलाई लक्षित गर्दै ‘समुन्नत राष्ट्र,सम्पन्न नागरिकका लागि प्रभाशाली कांग्रेस’
सरकारको समर्थन फिर्ताबारे छलफल भएको छैनःठाकुर
जनकपुर । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा अहिलेसम्म पार्टीमा छलफल नभएको बताएका छन् । यसबारे पार्टीको विस्तारित बैठकले निर्णय गर्ने पनि उनले स्पष्ट पारे । मंगलबार जनकपुरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै ठाकुरले सरकारलाई दिएको
काठमाडौं । नेपाल महिला संघले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तका हत्यारालाई पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को राजीनामा माग गरेको छ । आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा नेपाल महिला संघले पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउन वर्तमान
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को १९औँ शिखर सम्मेलन पाकिस्तानमा गराउन नेपालका तर्फबाट भूमिका निर्वाह गरिने बताउनुभएको छ । ‘एशिया प्रशान्त शिखर सम्मेलन’ मा भाग लिन नेपालको भ्रमणमा रहनुभएका पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री युसुफ राजा गिलानीसँगको
काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले सोचे अनुसारको काम गर्न नसकेको बताएका छन् । शुक्रबार त्रिभुवन बाल मावि कावासोती नवलपुरको स्वर्ण महोत्सवको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने ‘सरकारले सोचे जस्तो काम गर्न सकिरहेको त छैन तर चुनावमा गरेका सबै प्रतिबद्धता ५ वर्षभित्र पुरा गर्छौ।’ जनताका